यो भिडियो हेरेर नरुने को होला र ? किन रुदै आए यी युवा मिडियामा ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/यो भिडियो हेरेर नरुने को होला र ? किन रुदै आए यी युवा मिडियामा ?
ओखलढुङ्गा । ओखलढुङ्गाका रोदिन दाहाल । वर्षले उनी १८ पुगेका छन् । ८ वर्षको उमेरमै आमा गुमाए रोदिनसंग अहिले उनका एउटा भाई पनि छन् । आमा नहुँदा बुवा त साथैमा थिए रोदिनको तर बुवाले आमाले छाडेको एक दुई महिनामै छिमेकीको जिम्मा लाएर छाडि दिएछन् । आफै त सानो त्यसमाथि झन सानो भाई । जीउँदै हुँदाहुँदै पनि बुवाले छाडेर गएको कुरा न रोदिनले बुझ्न सके न त आफुभन्दापनि झन सानो भाईले नै ।
रोदिनको भनाईमा उनका भाईलाई आमाबुवाको खासै याद आउँदैन रे । किनभने उनका भाईले सानैदेखि आमाबुवा दुवैको झल्को पाउनेगरी समय बिताएनन् रे । तर रोदिनको भने सही र गलत छुट्टयाउन सक्ने उमेर भएको हुनाले त्यो समयको सबै कुरा उनको मानसपटलमा कैद भएको छ । जस्ले आजपनि रोदिनलाई आमाका हरेक कुराहरुले रुवाई रहन्छ । आमा जस्तो अरु संसारमै कोही नहुने रहेछ भन्दै जब रोदिन रुन थाले पुरा भिडियोमा हेर्नुहोस्